Fuula kana iiratti Chart Wizardtaattoo maalimoota agarsiifaman filachuu dandeessa.
Taattoo malimoota saaguuf
Matduroota saagi ykn maalimoota taattooo ammee irratti akka agarsiifaman barbaade cuuqaasi.
Osoo barruu matdureef, cita matdureef, ykn siiqqee kamiyyuu saagde, iddoo barbaachisaan barruu taattootti aansuun agarsiisuuf olkaa`ama.
Matduree barruu man`ee waliin walqabsiisuun hin danda`amu. Dirqama barruu kallattiidhaan saaguu qabda.
Yeroo taattoon xumuramu, bakkaa fi amaloota biraa baafata Dhangii jedhuun jijjiiruu ni dandeessa.
Waayoon moggaasa tarree ykn tarjaa duraa irraa, ykn hangii qaaqa Deetaa walfaannee irraa agarsiisa. Yoo taattoon moggaasa ofkeessatti hin qabatu ta`e, waayoon barruu kan akka "Tarree 1, Tarree 2, ...", ykn "Tarjaa A, Tarjaa B, ..." akkaataa lokkoofsa tarree ykn qubee tarjaa kan taattoo deetaatiin agarsiisi.
Barruuun ofummaan Maqaa hangii man`ee irraa uumama, kallattiidhaan saaguu hin dandeessu.
Sararootni tarshaa argamanii gatiiwwan deetaa taattoo keessaa tilmaamuuf gargaaru.
Fageenyi lakkoofsa tarshaalee qindaa`inoota orofaa kan amaloota siiqqee madaallii tabii walii walgita.
Taattoolee muraangoof sararootni tarshaa hin argamne.
Title is: Taattoo Masaka - Taattoo Maalimoota